Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuun isaanii himame });
Dr. Mararaa Guddinaa hiikamuun isaanii himame
Dura taa'aa paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa hidhaa waggaa 1 fi baatii lama booda har'a gadi dhiifaman.
Ministirri komunikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo, Dr. Mararaan amma booda nama bilisa, "maatii isaaniin baga gammaddan" jechuun BBC'tti himanii jiru.
Ministirichi kana haa jedhan malee, Dr. Mararaan mana isaanii hin geenye. Ilma obboleettii Dr. Mararaa kan ta'e Taayyee Nagaraa, Dr. Mararaa simachuuf gara mana hidhaa Qaalittiitti obboroon imalanii eegaa erga turanii booda, hoggantoonni mana sirreessaa Qaallittii "manatti fidna, galaa manatti eegaa" nuun jedhan jechuun BBC'tti himee jira.
Maatii, hiriyootaafi dinqisiifattoonni Dr. Mararaa isaan simachuuf Buraayyuu, naannoo mana Jirenyaa isaaniti wal dhegani dhegaa jirru.
mana jireenyaa isaaniitti wal gahanii eegaa jiru.
Dr. Mararaa Guddinaa namoota 115 himatni isaanii adda citee mootummaa federaalaan gadhiifamu jedhaman keessaa isaan tokko. Xalayaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaatiin Mana Murtii Federaalaa damee Lidataaf barraa'e, Dr. Mararaan himatni isaanii kan adda cite 'faayidaa uummataafi mootummaafi' ta'uu agarsiisa.
Dura taa'aan paartii Koongirasii Federaalistiii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa affeerraa paarlaamaa Awrooppaatiin qaamolee garaa garaa waliin mari'atanii wayita biyyatti deebi'an Sadaasa bara 2016 kan hidhaman.
Dr. Mararaan Awurooppaa deebi'anii erga hidhamanii booda Oromiyaa keessatti jeequmsi akka ka'uu fi namaaf qabeenyarra miidhaan akka gahu waamicha gootaniittu jedhamuun mana murti federaalaa dame Lidataa dhaddacha yakkaa 19ffaatti himatamaniiru.
Himanni irratti banames kan kanaa gadiiti. Dura taa'ummaa Paartii KFO fi paarticha dahoo godhachuun kaayyoo siyaasaa, amantaa fi ilaalcha dhuunfaa galmaan gahuuf yaaduun akkasumas mootummaarratti dhiibbaa uumuun sochilee siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee biyyattii jeequufii kuffisuuf socho'aniiru.
Bara 2014 dhimma maastar pilaanii qindaa'aa Finfinneen walqabatee magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti deeggartoota isaanii jeequmsaa fi hokkaraaf kakaasaniiru.
Godina shawaa lixaatti ijaarsa daandii magaalaa Amboo gara Kaarraa geessuu addaan kuchisiisuun, kaampii gubsiisuun konkolaattotaa fi maashinaroota irraa balaa birrii miiliyoonaa lamaa fi kuma dhibba sagaliifii shantami torbaatti shallagamu akka barbadaa'u taasisaniiru jedha.
Magaalaa Burraayyuutti qabeenya birrii miiliyoona 42'tti shallagamu irra balaan akka gahu kakaasuu, godina shawaa kibba lixaatti aanaalee Walisoo, Ammayya, Gooroo, Tolee, Iluu, Qarsaa fi Wanciitti manneen bulchiinsa gandaa, manneen jireenyaa dhuunfaa, dhaabbilee inveestimantii habaaboo fi meeshaalee biroo miiliyoona 17'tti tilmaamamu irratti miidhaan akka gahu taasisaniiru.
Ayyaan irreechaa bara 2016 irratti hidhattoonni mootummaa uummata Oromoo ayyaanicha kabajaa ture irratti ajjechaa raawwataniin namoonni 678 ajjefamaniiru jechuun Televijiinii Oromiyaa Midiyaa Netwoorkitti himuun waamicha jeequmsaa dabarsaniiru kan jedhanidha. Hirmaannaan Siyaasaa Dr. Mararaa Guddinaa maal fakkaata? Barataa mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa ta'anii wayita jiran Siyaasa egalan Barataa Yunivarsiitii Finfinnee wayita turan Miseensa Ma'isoon ta'an.
Miseensa Ma'isoon ta'uu isaaniitiif mootummaan Dargii murtee seeraa malee waggaa torbaaf isaan hidheKufaatii dargii booda paartii siyaasaa hundeesanii hirmaannaa siyaasaa isaanii itti fufan Bara 1997 filannoo biyyoolessaa irrattti hirmaachuun filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'an. Yunivarsiitii baroota hedduuf barnoota siyaansii Siyaasaa itti barsiisan irraa ariyataman Afferraa Paarlaamaa irratti argamanii wayita deebi'an qabamanii hidhaman Waayee Dr. Mararaa Guddinaa qabxiilee ijoo Dr. Marara Guddinaa mootummaa mormuu kan eegalan barataa sadarkaa lammafffaa Amboo wayita turanii dha.
Qabsoo barattootaa sirna hayla sillaasee kuffisuuf sababa ta'e keessaas harka qabu. Bara barataa banoota saayinsii Siyaasaa Yunivarsiitii Finfinnee turanittis sirna bittaa humna waraanaa Mangistuu Haylamaariyaamitti sirnicha mormuun socho'aa turan. Sababa kanaafis murtee yakkaa tokko malee waggoota tptbaaf hidhaman.
Wayita hidhaatii bahanis barnoota isaanii itti fufuf gara Yunivarsiitii Ameerikaa magaala Kaayerootti argamuutti imalan.
Addi Dimookratawaa Warraaqsa Ummattoota Itoophiyaa Sirna Dargii erga Aangoorra Buusee waggoota shan keessatti Dr. Mararaan Paartii biyyoolessaa Koongireesii Oromoo hundeessuun ammas gara hirmaannaa siyaasaatti deebi'an.
Kaayyoon Paartiin Dr. Maraaraan hundessan kanaa inni guddaan biyyaa Itophiyaa jedhamtu keessatti uummatta bal'aa baroota heedduuf cunqurfamaa ture hiree isaa akka ofiin murteefatu gochuu ture. Itti dabalees Afaan Oromoo Amaariffaatti dabalee Afaan Hojii Federaala akka ta'u gochuu ture.
Moggaasni maqaa paartichaa akka jijjiiramu miseensotaan haaluma gaafatmeen bara 2008 paartii Koongireesii Uummata Oromoo akka ta'u murteessuun hojii hooggansaa paartii siyaasaa isaanii itti fufan.
Dr. Mararaan paartilee siyaasaa biro waliinis ta'uun qindoomina biyyolessumaa paartilee siyaasaa gidduutti fiduuf paartilee ''Hibartii'' fi ''Madrak'' jedhaman hundeessuu fi dursuudhaaniis gahee olaanaa qabu.
Hojiilee siyaasaa maddiittis Yunivarsiitii hangafa biyyaatti Finfinnee keessatti baroota dheeraaf barsiisaa fi hoogganaa muummee barnoota saayinsii Siyaasaa ta'uunis tajaajilaa turaniiru.
Dr. Mararaa Guddinaa Miseensummaa Mana maree bakka bu'oota uummataaf dorgomanii kan turan yommuu ta'u filannoo bara 2002 naannoo dhaloota isaanii shawaa lixaatti injifachuun miseensa paarlamaa ta'aniiru. Mana maree sana keessattis sagalee uummataa ta'uun fayidaan uummataa akka kabajamuuf gahee olaanaa bahaniiru.
Bara 2014 tti mormii naannolee Oromiyaa keessatti dhohee yeroo dheeraaf itti fufeen labsii yeroo hatattamaa cabsuun qaamolee farra nageenyaa ta'aniifii gareewwan shororkeesitoota jedhaman waliin hariiroo qabdu jedhamuun sadaasa bara 2016 hidhamaniiru.
Dr. Mararaan beekumsa saayinsii siyaasaa barataa ta'uuniifi barsiisummaan horatan akkasumas hoogganaa partii siyaasaa mormituu ta'uun horataniin Siyaasa Itoophiyaarratti barruulee heedduu barreesaniiru. Dhimmuma kana irrattis waltajjiwwan adda addaa irratti ibsa kennuuf afeeramaniiru.
Hidhamuu isaaniin duras sadaasa bara 2016 affeerraa Paarlaamaa Awroopaatiin miseensota paarlaamaa Awroopaaf haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru ilaachisee ibsa kennaniin labsii yeroo atattamaa mootumman Itophiyaa labse balaaleffatanii turan. Dabalataanis hooggantoota dhaabbilee paarlaamaa Itophiyaatiin shororkeessitoota jedhaman akka 'Ginboot 7' waliin wal arguun isaanii hidhamuu isaaniif sababa akka ta'e dubbatamaa jira.